တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းစီမံကိန်း အဓိကလမ်းတံတားများအား တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးနေသည့် နည်းပညာရှင်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းခွင်ပုံရိပ်များ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ယွမ်ကျန်းမြစ်ကူးတံတားကြီးပေါ်တွင် မီးရထားတစ်စီး ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သွားသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယွမ်ကျန်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် စီဖုန်ပင်းသည် တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ အဓိကလမ်းတံတားဖြစ်သည့် ယွမ်ကျန်းမြစ်ကူးပင်မတံတားကြီးကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် နည်းပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ယွမ်ကျန်းမြစ်ကူးတံတားကြီးတွင် စီဖုန်ပင်းနှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ တံတားအား စစ်ဆေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယွမ်ကျန်းမြစ်ကူးတံတားတစ်ခုလုံး၏အရှည် ၈၃၂.၂ မီတာ ရှိပြီး တံတားထောက်တိုင် ၆ ရှိရာ အမြင့်ဆုံး ထောက်တိုင်ဖြစ်သော တိုင်နံပါတ် (၃) သည် ၁၅၄ မီတာ ရှိသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလကစပြီး တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေးတွင် စတင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ စီဖုန်ပင်းသည် တံတားအချိန်မီပြီးစီးရန်အတွက် မင်္ဂလာရက်ကိုပင်ရွှေ့ဆိုင်း အလုပ်ဆင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းပြီးစီး၍ လည်ပတ်သည့်အခါ ၎င်းသည် နေ့ဘက်တွင် တံတားအမြင့်များ၏အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း ၊ ညဘက် ရထားဝန်ဆောင်မှုရပ်နားချိန်၌ တံတားကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ယခုနှစ် နှစ်ကူးနွေဦးပွဲတော် ပိတ်ရက်ကာလတွင်လည်း စီနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံဘေးကင်းရန်တွက် ပိတ်ရက်မယူဘဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Pic story ofatechnician maintaining key bridge of China-Laos Railway project
YUANJIANG, Jan. 21 (Xinhua) — Shi Pengbin, 28, isatechnician responsible for maintaining the Yuanjiang major bridge,akey bridge of the China-Laos Railway project. Spanningafull length of 832.2 meters, the Yuanjiang bridge uses six bridge piers with the No.3 bridge pier, the highest pier, standing at 154 meters.
Shi, who started working for the construction of the China-Laos Railway from April 2020, even postponed his wedding to guarantee on-time completion of the bridge.
After the operation of China-Laos Railway, Shi’s work includes checking the bridge in high places during the day, and repairing the bridge floor during the break time for rail service at night.
During this year’s Spring Festival holiday, Shi and his colleagues will stick to their posts to secure the railway transportation.
Aerial photo showsatrain crossing the Yuanjiang major bridge over the Yuanjiang River in southwest China’s Yunnan Province, Jan. 18, 2022.(Xinhua/Chen Xinbo)
Shi Pengbin and his colleague check the bearing of Yuanjiang major bridge over the Yuanjiang River in southwest China’s Yunnan Province, Jan. 18, 2022. (Xinhua/Chen Xinbo)